China 1 / 6oz 5ml mini mpịakọta-na iko dị mkpa mmanụ karama metal ala bọl home esi ísì ụtọ karama factory na suppliers | Jiamei
1 / 6oz 5ml mini mpịakọta-na iko dị mkpa mmanụ karama metal ala bọl home-esi isi ụtọ karama
Ihe: iko, igwe anaghị agba nchara.
Agba: amba, acha anụnụ anụnụ, *, ojii maka nhọrọ gị.
Ike: 10 ml / 0.3 oz.
Mbukota: 6 iberibe kwa iji.
Elu njikwa Hot zọ
Ihe eji eme ihe Nlekọta Onwe
Isi ihe iko
Ihe olu akwa iko
Dị akara Nyefee Na
Jiri Mkpa Mmanụ
Nọmba nlereanya BLP-5ml
Aha Akara JiaMei
agba agba ọ bụla maka esi ísì ụtọ karama
jiri maka Ọgwụ, jupụta n'anya ude, kenkowaputa mmanụ, senti wdg.
UV agba agba ọ bụla dị maka isi na-esi ísì ụtọ
Ojiji karama isi
nnyefe 35ụbọchị maka karama senti na-esi isi
sample oge 7ụbọchị
Mbipụta ihuenyo mbipụta ọ bụla maka karama senti na-esi isi
1. Ihe: iko, igwe anaghị agba nchara.Color: amba, acha anụnụ anụnụ, *, nwa gị oke.Capacity: 10 ml /0.3 oz.Packing: 6 iberibe kwa iji.
2. Kalama ahụ bụ ihe na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịghaghachi.Ọ dị mma maka iji ọgwụ na-egbu egbu, anwụnta, ude, moisturizer, gbanye mmanụ ndị dị mkpa, mmanụ na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ.Perfect maka njem ma ọ bụ na obere akpa gị.
3. Ọdịdị nke karama ahụ dị mfe ma na-emesapụ aka, ọnụ ya dị larịị, ala dị larịị, mgbidi mgbidi bụ otu, ihe na-egbuke egbuke na-enwu gbaa, akara ahụ dị ike, ma nwee ike ịchekwa ngwaahịa ka mma.
4. The drum size na-enye ohere maka mma edo esemokwu na mmiri mmiri na-enweghị ukwuu waste.The okpu na-eme ka karama ọzọ tightly anọkwasị na-egbochi ngwaahịa si leaking.Easy ọcha na iwerekwa.
5. nwere ike iji ihe okike mee ihe na-atọ gị ụtọ nke ukwuu wee nwee ọ Dụ na Mee N'onwe Gị. Enwere ike inye ndị ọzọ onyinye mara mma nke karama nwa ahụ.
Ihe: plastic, igwe anaghị agba nchara, iko.
Isi ahụ: amba, *, acha anụnụ anụnụ, uzo, otu maka agba ọ bụla.
Akụkụ: dị ka egosiri na foto a.
Ike: 30 ml / 1 oz
Mbukota: 4 iberibe kwa iji.
Nke a bụ ihe efu na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike jupụta.Ọkụ mmiri na-agbanwe agbanwe, okpu plastik, igwe anaghị agba nchara.Wide ngwa ngwa, nwere ike ikpuchi mmiri mmiri dị elu, mana okpu ahụ siri ike. nke kalama ahụ dị larịị, ala dị larịị, mgbidi mgbidi ahụ bụ otu, ihe na-egbukepụ egbukepụ, ìhè dị elu, akara ahụ siri ike, enwere ike ichekwa ngwaahịa ka mma.
Iko adịghị mfe ịmeghachi ahụ na ihe ịchọ mma, nchekwa gburugburu ebe obibi na ịdị ọcha. Mkpịsị aka na-acha uhie uhie nwere ike ichebe ihe ịchọ mma site na ọkụ. nha na-enye ya ohere ịmịcha nke ọma na mmiri mmiri n’ebughị oke oke.
You nwere ike iji ihe okike mee ihe na-atọ gị ụtọ nke ukwuu ma nwee ọ Dụ Mee N'onwe Gị. A pụkwara inye ndị ọzọ onyinye mara mma nke karama nwa ahụ.
A na-ejikarị ya eme ihe: A ga-eji arịa na-egbu mmanụ, * anwụnta, * ude, moisturizer, mmanụ dị mkpa, mmanụ na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko zitere anyị email ma anyị ga-aza n'ime awa 24. Daalụ nke ukwuu!
Osote: N'ogbe efu mkpa mmanụ ala karama akpa 10ml ntu oyi doro anya amba-acha anụnụ anụnụ iko mpịakọta na senti karama na metal obi ụtọ